Mpanakanto Japoney Nanao Volombavan’i Hitler Tamin’ny Fanambarana Politikan’ny Taombaovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Janoary 2015 7:11 GMT
Nahasanganehana ny maro ilay mpanakanto malaza Japoney nandritra ilay fandaharana malaza isaky ny andro mialoha ny taombaovao tamin'ny 31 Desambra noho izy nanao volombava maka tahaka an'i Hitler nandritra ny fampisehoany.
Mpanorina sy lehiben'ny tarika Kintan'ny Tatsimo Daholo, iray amin'ireo tarika be mpankafy indrindra sy malaza tamin'ny taona 1980 ao Japana i Keisuke Kuwata. Rehefa nahalafo rakikira an-tapitrisany sy niato teo anelanelan'ny taona 2008 sy 2013, dia nipoitra tamin'ny fandaharana mivantana mandeha amin'ny zanabolana ny Kintan'ny Tatsimo Rehetra, tarihin'i Kuwata izay tafiditra ao anatin'ilay fifaninanan-kira NHK Mena sy Fotsy, fantatra amin'ny hoe the Kohaku. Efa mahazatra ireo Japoney an-tapitrisany ny fijerena ny Kohaku ankatoky ny taombaovao hatramin'ny nanombohany tamin'ny 31 Desambra 1949.
Toa seho nasongadina manokana mihitsy ny fipoiran'ny Kintan'ny Tatsimo Daholo tamin'ity taona ity. Na dia izany aza, nanjary iray tamin'ireo lohahevitra mafana indrindra avy hatrany teo amin'ny tontolon'ny media sosialy ao Japana ny fanapahan-kevitr'i Kuwata hampitolagaga ireo mpijery amin'ny alalan'ny fampiderana volombava maka tahaka an'i Hitler tamin'ny fiandohan'ny andian-kira.
Nahoana i Keisuke Kuwata no manao volombavan'i Hitler? Tsy nolazainy ny antony, izay niteraka fanombatombanana tao amin'ny aterineto .
Maro ireo mihevitra fa ny antony ambadik'ilay volombavan'i Hitler (antsoina hoe ち ょ び 髭 na chobi hige amin'ny teny Japoney) nanaovan'i Kuwata dia noho ny fampahafantaran'ny Kintan'ny Tatsimo Daholo ny hira malazan'izy ireo “Peace and Hi-Lite.”
Araka ny fanamarihana nataon'i Kuwata momba ny hira izay notaterin'ny Japan Times tamin'ny volana Aogositra 2013:
“Hitako tamin'ny vaovao fa sosotra ireo mpiray vodirindrina aminay. Tsy misy dikany izay isan'ny fifampiresahana nataonay, toa hita fa tsy miova mihitsy ny tohan-kevitra, ” hoy ny tononkira nosoratan'ilay lehibe manakajan'ny tarika, Keisuke Kuwata.
Ilay hira ihany koa dia maneho izay mety azo raisina ho tsikeran'ny Praiminisitra Shinzo Abe sy ny fiijeriny manavao indray ny hevitry ny tantaram-pirenena, mampitandrina fa “mitady hanadino ny lasa mampalahelo sy fahadalam-pihetsika nataon'izy ireo ny olona”
Nilatsaka ny 31 Desambra 2014 ny fandaharan'ny Kohaku taorian'ny fifidianana mialoha natao tamin'ny Desambra izay nahitana ny fiaraha-mitantana, anisan'izany ny Praiminisitra Shinzo Abe sy ny Antoko Demaokratika Liberaly (LDP), izay lany indray tamin'ny maro an'isa tanteraka nahazo seza 325.
Raha very toerana maro ny antoko LDP, dia misy ny tahotra fa hamela an'i Abe hanova ny “lalàmpanorenan'ny fandriampahalemana” an'i Japana izay miampanga ny ady sy mankasitraka ny filaminana ny fiaraha-mitantana maro an'isa tanteraka eo amin'ny fitondrana – ary mety hitarika ady mihitsy aza.
Nanao volombavan'i Hitler i Keisuke Kuwata raha nihira ilay hira manohitra ady nandritra ny iray tamin'ireo hetsika ara-kolontsaina goavana indrindra sy manandanja indrindra tao Japana.
Toa hita fa mitsikera an'i Abe [Praiminisitra Japoney] ny Kintan'ny Tatsimo Daholo. Koa lazaina fa manamarika an'i Hitler ve ilay volombava kely mampihomehy?
Satria hoe mpanakanto goavana ianao dia tsy midika fa tia tanindrazana noho ny hafa ianao. Ary satria nipoitra hankafy izay ataon'ny mpanakanto ianao, tsy midika izany fa tsy maintsy manaiky anjambany izay lazain'izy ireo ianao. RE: Mitarika Adihevitra Mafana ny Tsikeran'i Kohaku Momba an'i Abe.
Mpisera Twitter iray nandefa dika manesoeso momba ny volombavan'i Kuwata :
Nihevitra aho fa ny volombavan'i Hitler nanaovan'i Keisuke Kuwata dia mihoatra noho ny fanomezam-boninahitra an'i Cha Kato [mpanao hatsikana malaza]. Tsy misy idirany amin'ny fitsikerana an'i Abe izany. Na izany aza dia tsy afaka miresaka na dia iray amin'ny hira politikan'ny Kintan'ny Tatsimo Daholo aho. Ary ry NHK: ahoana no ahafahanareo mandefa fandaharana ahitana olona maka tahaka an'i Hitler ???
ny fihetsika na fihevitra na ny fomba fitafy na ny zavatra atao antsary dia meleka eo anatrehan’ny lalana , tsy mifanaraka intsony @ zo mahaolona no olona
10 Janoary 2015, 12:07